Mpanamboatra sy solosaina azo ahodina tsara indrindra | Media
Window amin'ny Casement
Window amin'ny rindrin'ny ambainy
Fisondrotana Slimline sy varavarana misosa
Varavarana mihorona Bi
Varavarana mihetsiketsika azo avadika
Tafo ivelany sy rafitry ny alokaloka
Rafitra mihetsiketsika azo ovaina
Ny rafitra fizarazaran'i MEDO slidig dia manaparitaka ny filaharan'ny trano misy ny endrika fiainana tsy manam-paharoa. Tazomy ny firafitry ny trano tany am-boalohany ary atsofohy amin'ny fiainana maoderina ireo singa vaovao. Ny fampifangaroana ny fotoana mijanona sy ny toerana mavitrika dia manome ny olona fahalalahana amin'ny asa aman-draharaha ary mahita fifandanjana tanteraka eo amin'ny dinika sy ny static.
Notsotsorina tsotra izao fa tsy tsotra tsotra izao nefa tsy azo antoka
Sliding Partition System
Sliding partition dia vokatra tena ilaina amin'ny maritrano minimalista. Satria ny vokatra ihany dia fomba fijery mahafinaritra!
Sehatra Sime, tontonana lehibe, max si2e isaky ny tontonana 2000mm * 200rm, tsy misy milion'ny comer.
Rehefa ekenao dia manjavona ilay varavarana.
Rehefa manidy azy ianao, ny varavarana dia tsy vitan'ny hoe misongadina tsara amin'ny fahateren'ny rano, ny fahateren'ny rivotra ary ny tatatra mba hanomezana sate sy feo horme, fa koa manome hatsarana miavaka ny maritrano.
MEDO Turnable Sliding System dia mamela ny tontonana rehetra hikorisa ary hihodina zoro marobe mba hampidirina amin'ny rindrina amin'ny farany, manome ny vokatry ny "rindrina manjavona" miaraka amin'ny fomba fijery tsy voahidy 360 degre.
Ny tontonana tsirairay dia afaka mivezivezy tsy miankina. Miaraka amin'ny rafi-roller manokana, mihetsika malalaka sy milamina ireo takelaka na dia amin'ny habe lehibe aza, izay manokatra ny fahafaha-manaon'ireo mpanao mari-trano te-hamorona varavarana haben'ny rindrina. Miaraka amin'ny famolavolana endriny manify, ny fomba fijery dia avo indrindra hatramin'ny fetrany.
90 ° sy 270 ° fisokafana misy zoro zahana
90 ° ary 270 ° fisokafana miaraka amin'ny fomba fanokafana vaovao ho an'ny toeram-ponenana vaovao.
Pourar zorony malalaka mitsoraka amin'ny 360 * fanokafana feno.
Ny varavarana mitsivalana mitsivalana dia mitambatra amin'ny trano mba hamoronana tantara vahaolana ivelany, manome ny effet minimalist facade an'ilay trano. ny famolavolana ny rindrina mangarahara dia mitondra permeabilité tsara sy fampiononana ho an'ny mpampiasa, hahafahan'ny fahitanao sy ny asanao hanafaka.
Teo aloha: Slimline Sliding System
Rafitra fampiakarana Slim & Slide
Rafitra famolavolana Bi
Rafitra rindrin'ny ambainy
Telefaona: 0086 159 2097 0640 (Bella)
Telefaona: 0033 6 5093 1674 (Alain)